Powder Alpha GPC Powder (28319-77-9) mpanamboatra - Chemical Phcoker
alpha-GPC (glycerylphosphorylcholine L-Alpha, alfoscerate choline) dia voajanahary ……
Ny glycerylphosphorylcholine L-Alpha (alpha-GPC, choline alfoscerate) dia kôline choline voajanahary hita ao amin'ny ati-doha. Izy io koa dia precursor acetylcholine parasympathomimetic izay mety manana ny fitsaboana ny aretin'i Alzheimer sy ny dementia hafa.
Ny vovo-dronono Raw Alpha GPC (Choline Alfoscerate) dia mamindra haingana any amin'ny ati-doha amin'ny sakana amin'ny lalan-dra ary ati-doha amin'ny acetylcholine. Izy io dia fanafody tsy misy fanafody any amin'ny ankamaroan'ny firenena.
Vovoka Alpha GPC (Choline Alfoscerate) mena (28319-77-9) Specifications
Product Name Vovoka Alpha GPC (Choline Alfoscerate) manta
Storage Temperature 0 - 4 ° C mandritra ny fotoana fohy (andro ka hatramin'ny herinandro), na -20 ° C mandritra ny fotoana maharitra (volana).
Application Choline Alfoscerate dia ampiasaina amin'ny fitsaboana aretina Alzheimer sy dementias hafa.
Vovoka Alpha GPC (Choline Alfoscerate) mena (28319-77-9) famaritana
Alpha GPC no anarana mahazatra an'ny glycerylphosphorylcholine L-Alpha, nootropic cholinergic izay mitranga voajanahary nefa azo raisina ho famenony. Ny vovoka Alpha GPC dia fantatra amin'ny alàlan'ny fandefasana choline haingana any amin'ny ati-doha ho an'ny famoronana acetylcholine neurotransmitter izay manatsara ny fahalalana.
Vovoka Alpha GPC (Choline Alfoscerate) manta (28319-77-9) Mekanisme ny hetsika?
soa ny vovoka Raw Alpha GPC (Choline Alfoscerate) (28319-77-9)
Recommended vovoka Alpha Alpha GPC (Choline Alfoscerate) voatondro (28319-77-9) levitra
Side effects ny vovoka Raw Alpha GPC (Choline Alfoscerate) (28319-77-9)